Baarlamaanka Maamul Gobaleedka Puntland oo Maanta Doortay Guddoomiye Cusub. |
Baarlamaanka Maamul Gobaleedka Puntland oo Maanta Doortay Guddoomiye Cusub.
“Waan la socdaa mas’uuliyad weyn ayaan qaaday ,waxanan rajaynayaa in aan uga soo baxo sida ay tahay waana u mahad-celinayaa cid walba oo doorashadayda ku faraxday “ ayuu yiri gudoomiyaha cusub oo ka hadlayay doorashadiisa.
“Musharaxa ila tartamayay waxaan u rajaynayaa guuul doorashooyinka danbe ,waxaana horyaal howlo badan oo u baahan in wax laga qabto “ ayuu mar kale yidhi Axmed Xaashi oo tilmaamay in doorashadan u ahayd isaga mid taariikhi ah.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha cusub ayaa horey u soo noqday hogaanka barlamaanka Puntland intii u dhaxaysay 2005-tii ilaa 2009-kii ,waana markii labaad oo uu xilkan ku guulaysato ,iyadoo xildhibaanno warbaahinta la hadlay ay sheegeen in in mas’uulkan cusub uu howshan khibrad u leeyahay.